Bato reCCC Rinoti Mutumbi weNhengo Yaro, Muzvare Moreblessing Ali, Wawanikwa Wakakandwa muTsime kuNyatsime.
Chikumi 11, 2022
Nhengo yebato reCCC Muzvare Moreblessing Ali vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu kuNyatsime, kuChitungwiza.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutumbi wemunhukadzi waburitswa nemapurisa kubva mune rimwe tsime kuNyatsime kuChitungwiza waonekwa kuti ndewenhengo yaro, Muzvare Moreblessing Ali, avo vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu unove mwedzi wapera.
Izvi zvatsinhirwawo nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioer Paul Nyathi, avo vazivisa vatori venhau kuburikidza negwaro ravaburitsa kuti pane mutumbi wakachekwachekwa wawanikwa wakakandwa mutsime papurazi reDenota Farm riri pasi peBeatrice.
VaNyathi vati mutumbi uyu watanga kuonekwa naAmai Linnah Mukandi (57), vanove amai vemurume ari kufungidzirwa kuti ndiye akaponda Muzvare Ali, Pius Jamba.
Vatiwo mapurisa azivisa mhuri yaMuzvare Ali, uye vari mushishi kuti vanyatsoongorora nekuzivisisa nezvemutumbi uyu.
VaNyathi vayambirawo vezvematongerwo enyika kuti vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi vachitiwo vari mushishi kutsvaga Jamba.
Kanzura vekuChitungwiza vari nhengo yebato reCitizen’s Coalition for Change, VaMusa Makweza, vaudza Studio 7 kuti mutumbi waburitswa mutsime uyu ndewaMuzvare Ali.
VaMakweza vati sezvo zvinhu izvi zvaitika kumadeuka kwezuva, vanga vasati vagara pasi sebato kuti varonge matanho ekutora.
Mutauriri webato reCCC, Muzvare Fadzayi Mahere vanyorawo padandemutande reTwitter vachiti boka ravo rezvekuchengetedzwa kwebato pamwe nehutungamiri hwavo muChitungwiza vari kushanda pamwe nemapurisa, uye vave kumirira gwaro riri pamutemo rinobva kumapurisa pamusoro pekushaya kwaMuzvare Ali.
Kutsakatika kwaMuzvare Ali kunonzi nevamwe kune chekuita nezvematongerwo enyika, asi mapurisa achiti Muzvare Ali vakazvuzvurudzwa nemumwe wavo wavaimbofambidzana naye, Pius Jamba, kubva pane imwe nzvimbo inotandarirwa makare muNyatsime mushure mekunge vanetsana uye hapana akazovaona zvakare.
Gweta riri kumirira mhuri yekwaAli panyaya iyi, uye vari mumiriri weSt. Mary’s muparamende, VaJob Sikhala, vatiwo timbopa nguva kune mapurisa vaite basa ravovachitiwo tizovabata pashure.
Hurukuro naVaMusa Makweza